कृष्ण महराले रोशनीको डेरामा एक घण्टा १९ मिनेट के गरेर बिताए ? सीसीटीभी फुटेजले खुल्यो रहस्य::Nepal Online News Portal
कृष्ण महराले रोशनीको डेरामा एक घण्टा १९ मिनेट के गरेर बिताए ? सीसीटीभी फुटेजले खुल्यो रहस्य
निवर्तमान सभामुख कृष्णबहादुर महराले संसद सचिवालयकै कर्मचारी रोशनी शाहीको निवासमा एक घण्टा १९ मिनेट बिताएको खुलेको छ। समाचार अनुसार प्रहरीले संकलन गरेको सीसीटीभी फुटेजमा महरा निजी सुरक्षाकर्मी नै लिएर त्यहाँ पुगेको देखिएको हो। उनी त्यहाँ पुगेको सूचनाको प्राविधिक विश्लेषण गरेर प्रहरीले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई जानकारी गराएको थियो ।
जानकारीअनुसार साँझ ७ बजेर ६ मिनेटमा महराको गाडी शाहीको निवासछेउमा रोकिएको थियो। एक घण्टा १९ मिनेटपछि ८स्२५ मा उनी त्यहाँबाट फर्किएका थिए। त्यहाँबाट महरा सोझै सभामुख निवास बालुवाटार पुगेका थिए।
प्रहरीले बालुवाटार क्षेत्रबाट पनि सीसीटीभी फुटेज संकलन गरेको थियो, जसमा महरा ८ बजेर ५३ मिनेटमा निवास प्रवेश गरेको देखिन्छ। प्रहरी परिसर काठमाडौं र महानगरीय प्रहरी वृत्त बानेश्वरको टोली बुधबार साढे ९ बजेतिर शाहीको कोठामै गएर घटनाबारे थप बुझेको थियो। त्यतिबेला पनि शाहीले आपसमा बाझिने गरी घटनाबारे बताएकी थिइन्।